Video | Dr Aye Maung’s Rathedaung Speech delivered on 15 January 2018 – Kyaw Zaw Oo's Blog
January 20, 2018 February 19, 2019 kyaw zaw oo
Video | Dr Aye Maung’s Rathedaung Speech delivered on 15 January 2018
ဒေါက်တာအေးမောင် ရသေ့တောင်မြို့ တောင်ရင်းတန်းရပ်ကွက် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ (၁၅-၀၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့က ဟောပြောခဲ့တဲ့ဟောပြောချက်ကို အသံဖိုင်နဲ့ (လုံးကောက်) မြန်မာဘာသာပြန် စာတန်းထိုးထားတာကို ဗီဒီယိုဖိုင်ပြုလုပ်ပြီး ပူးတွဲပေးထားပါတယ်။ အဲသည် ဟောပြောချက် မြန်မာဘာသာပြန်ကို ဒီပို့စ်အောက်မှာ အစအဆုံး ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒေါက်တာအေးမောင်ကို စစ်တွေထောင်အချုပ် ပို့နိုင်အောင် ပြုလုပ်တဲ့ စွပ်စွဲချက် နှစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောဆိုမှုတွေဟာ ဒေါက်တာအေးမောင်အနေနဲ့ သဘောတရားပိုင်းအရ ပြောခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအချက်နှစ်ချက်ကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်ပြောရရင်တော့ဒီလိုပါ။
(တစ်) ဗမာတစ်နိုင်ငံလုံး အင်္ဂလိပ်ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ တန်းတူညီမျှနေခွင့်ရမယ် ထင်လို့ လွတ်လပ်ရေး အတူတူ ယူလာခဲ့ပြီးခါမှ အဲဒီအတိုင်းမဟုတ်ပဲ ငါတို့ဟာ ဗမာကျွန်တွေ ဖြစ်နေပါလားဆိုပြီးတော့ ခံစားနေရရင်၊ ဗမာတွေကိုယ်တိုင် ငါတို့ဘက်က ဘာတွေမှားနေသလဲ ဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်တယ်။
(နှစ်) ရခိုင်တို့ရဲ့အချုပ်အချာအာဏာကို ရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းကြရာမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်။ ကျွန်တော် (ဒေါက်တာအေးမောင်)တို့ အနေနဲ့ လူထုနည်းအားဖြင့် နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်။ ဒီနည်းကို မယုံကြည်တဲ့သူတွေ ဒီနည်းဟာအလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆတဲ့သူတွေကတော့ လက်နက်ကိုင်တယ်။ ဒီနှစ်လမ်းကိုသွားကြသူတွေရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကတော့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာအေးမောင်ရဲ့ ဟောပြောချက် မြန်မာပြန်စာသား အပြည်အစုံကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ . . . ကျွန်တော်က စာရေးဆရာ မဟုတ်ပါ။ စာရေးဆရာ မဟုတ်တော့ ရတုရကန်တွေ ပျို့တွေ လင်္ကာတွေနဲ့ စီကာပတ်ကုံး ရယ်စရာငိုစရာတွေကို ပြောလို့ရတဲ့လူလည်း မဟုတ်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးတဲ့ အကြောင်းအရာများဟာ မာမာကြောကြောများလည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါ တယ်။
ဒါကြောင့် . . . ကြိုပြီး မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ စာရေးဆရာတွေလို အရမ်း တင်းမာတဲ့ အချိန်မှာ ပျော့ပျောင်းသွားအောင် သီချင်းဆိုလို့လည်း မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီအခမ်းအနားကို ကျွန်တော့်အား ဖိတ်ကြား တဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော် တော်တော် စဉ်းစားပါတယ်။ တစ်ချို့ ဖေ့စ်ဘုတ်တွေမှာလည်း စာရေးဆရာလည်း မဟုတ်၊ ဟိုသွားဒီသွား ပါတီတစ်ခုထောင်ဖို့ စည်းရုံးရေး ဆင်းနေသလားမသိ ဆိုပြီးတော့ သံသယမျက်လုံးနဲ့ ရေးတာကိုလည်း ခံရပါတယ်။
ဆိုတော့ . . . ကျွန်တော့်ကို အခမ်းအနားမှူးက ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေကို တောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မပေးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်တွေကို နည်းနည်းလောက် ပြောပြီးတဲ့အခါမှ ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကို ပြောပါမယ်။ ကျွန်တော့်နာမည် အေးမောင်ပါ။ မယူကမ်း အောင်ဆိပ်မှာ ၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်နေ့မှာ မွေးပါတယ်။ ဗမာလို ၁၃၁၉-ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁၀)ရက်ပါ။ ညီအစ်ကို မောင်နှမ သုံးဦးရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် အကြီးဆုံးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ သားနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ မြေးနှစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ (၆၁)နှစ်ထဲမှာ ရောက်ပါပြီ။ (၂၅)နှစ်လောက် အစိုးရ၀န်ထမ်း လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကာလမှာလည်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့မှာ ငါးနှစ်လောက် အကြိမ်ကြိမ် လုပ်ပါ တယ်။ နောက် ပင်စင်ယူပြီးခါ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီကို တည်ထောင်ရာမှာ ကြားလူဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် ကို ဥက္ကဋ္ဌ တင်ကြပါတယ်။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အပေါ်မှာ (၁၈)၊ အောက်မှာ (၁၈) နေရာ နိုင်ပါ တယ်။ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး တစ်နေရာ ပါ,ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၅ ကို ဖြတ်ရန်ကာလမှာ ALD နှင့် RNDP ကို ပေါင်းပြီးတော့ ANP ကို တည်ထောင် ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့ ကျွန်တော် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီကနေ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကရော ပါတီဝင်အဖြစ်ကပါ နှုတ်ထွက်ပါတယ်။ အခု နှုတ်ထွက်ပြီးစ နှစ်လ၀န်းကျင်ထဲမှာပါ။ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အကျဉ်းပါ။ အခုလက်ရှိမှာ ကျွန်တော်ဟာ အမ်း မဲဆန္ဒနယ်မြေက ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ အခု . . . ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြန်ကြည့်ပါမယ်။ နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ် အချုပ်အခြာ အာဏာ ကျဆုံးတဲ့နေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျင်းပတဲ့ ရသေ့တောင် မြို့နယ်က မေယုရင်သွေး ပရဟိတအသင်းနဲ့ ယခုပါဆို ကျွန်တော် နှစ်ကြိမ်လာပြီး ယခုလို ဆွေးနွေးဖူးပါတယ်။ ဒီနေ့ . . . အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဟောပြော ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝေဟင်အောင် . . . ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ထင်ပါတယ်၊ ၂၀၁၅ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မနိုင်လို့ အားနေတဲ့ ကာလမှာ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပျံလွန်တော်မူတဲ့နေ့နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းကို ဖိတ်တဲ့အခါ အတူတူ . . . ကျွန်တော်ထင်တယ် . . . တစ်နေရာမှာ ဟောပြော ဖူးပါတယ်။ လူငယ်ပရဟိတသမား၊ နိုင်ငံရေး နဲ့နွယ်သော ဇာတိသွေး ဇာတိမာန်ကို တက်ကြွ အောင် ဟောပြောပို့ချနိုင်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးပါ။ အဲဒီ ကာလကတည်းက ကျွန်တော်တို့ သဘောပေါက် ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်ရှေ့မှာ တစ်နာရီ ကျော်ကျော် လောက် စီကာပတ်ကုံး သမိုင်းသင်ခန်းစာတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေအတုယူသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာ လေးတွေကို ဟောပြောပို့ချပေးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော် . . . တော်တော်လေး . . . အခုနက ဆရာ ဦးဝေဟင်အောင်ရဲ့ ဟောပြောပို့ချချက်တွေကို အလေးအနက်ထားပြီးတော့ ကျွန်တော် အသံဖမ်းထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကဏ္ဍကျတော့ . . . ကျွန်တော် ဘာပြောရမလဲဆိုတာ . . . ကျွန်တော်ကတော့ ခေါင်းစဉ်ကို ဒီကိုရောက်မှပဲ ဘာပြောရမလဲဆိုတာကို စဉ်စားပါတယ်။ ဘယ်မြို့မှာမဆို ကျွန်တော် ကြိုပြီးဘာမှ မလုပ်ထားတတ်ပါဘူး။ ရောက်တဲ့အခါမှ ဖြစ်လာတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ကျွန်တော် ပြောပါတယ်။ အခုလည်း ပြန်ကြည့် တဲ့အခါမှာ . . . (၂၃၃)နှစ်သည် တကယ်တော့ စိတ်ပျက်အားငယ်နေစရာမလို။ (၂၃၃)နှစ်ကို ဘယ်လို ကျဉ်း အောင် တစ်နည်းအားဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာကျဆုံးခဲ့ရရင် ပြန်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ၊၊ အဲသလို မိမိတို့၏ စိတ်သန္တာန်ထဲမှာ စွဲမှတ်စေချင်လို့ လာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။
၀မ်းနည်းနေလို့ . . . ငိုကြွေးနေလို့ . . . အတိတ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို နောင်တရနေလို့ တော့ခါ . . . နောင်တရနေဖို့တော့ခါ လိုပါတယ်။ သင်ခန်းစာယူနေဖို့ လိုပါတယ်။ သို့သော် တမ်းတနေရုံနဲ့ တာဝန်မကျေနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါတွေကိုပြောချင်လို့ ဖိတ်မန္တကပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက . . . လာဖို့လည်း အားနေတယ် . . . မနက်ဖြန်ဆိုရင် “လလည်းကွယ် ပြည်လည်းဆုံး” ဆိုတဲ့ အခမ်းအနားကို ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ပါတယ်။ “တိမ်ညို” မှာ (၆)နာရီ၊ “နန်းရာကုန်း” မှာ (၁၀)နာရီလောက် ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီနေ့ဆို လွှတ်တော်ပြန်စပါတယ်။ ကျွန်တော်လွှတ်တော်မသွားဘဲ တစ်ပတ် လောက် ခွင့်ယူ ထားပါတယ်။
ဆိုရင် . . . ပြန်စပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့ . . . ဆရာဦးဝေဟင်အောင် ပြောခဲ့သလို ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံ ဆုံးသွားတာ မဟုတ်။ မြေရှိတယ်၊ လူရှိတယ်၊ ယဉ်ကျေးမှုရှိတယ်၊ အမွေအနှစ်ရှိတယ်။ အချုပ်အခြာအာဏာဆုံးသွားတာ။ ဒါကို အားလုံး လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အချုပ်အခြာအာဏာပြန်ရရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစား လာတာ သမိုင်းနဲ့ ချီပါ တယ်။
နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်မှာ . . . ယခု(၂၃၃)နှစ်တိုင်တိုင် လို့ ပြောလို့ရပါတယ်၊ တော်လှန်ရေး . . . ဆုံးရှုံးပြီးအချိန်ကစပြီး တော်လှန်ရေးကို လုပ်လာခဲ့တာ . . . ပြန်ကြည့်ရင် . . . ဦးဝေဟင်အောင်တို့ ပြောတဲ့ . . . တောင်မင်းကြီးကျော်ထွေး တို့ . . . ကျွန်တော်တို့ အမ်းမှာဆိုရင် ဒလက် ဘက်မှာ ငပေါလုံးတို့ . . . အဲဒီလိုနဲ့ အရှေ့ဘက်ကိုကျော်ပြီးတော့ ဒီယန္တရားထဲမှာ ၀င်ပါလာတဲ့ ငသံဒွေတို့ရဲ့ မျိုးရိုး . . . ချင်းပျံ . . . တော်လှန်ရေး မျိုးစေ့လေးကို ရတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့သည် နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်တိုင်ပါပြီ၊ သို့သော် ယနေ့ထက်ထိ ရုန်းကန်ကြိုးစားနေဆဲ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို . . . ။ ယခုကြွရောက်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကြည့်တဲ့အခါ လူငယ်တွေ များများပါတယ်။ လူငယ်ထဲမှာ အမျိုးသမီးငယ်တွေ အများကြီးပါတယ်၊ နောင် မိခင်လောင်းတွေ ဖြစ်မယ့် . . . သားသမီးတွေကို မျိုးစေ့မှန်ကို ရောက်အောင်၊ ပဲ့ပြင်ပုံသွင်းနိုင်မယ့် အနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေ . . . ။ အားရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ . . . ဦးဝေဟင်အောင်(တို့ ပြောသ)လို မင်းသားကြီး ရွှေဘန်း မှာခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ မနေ့ကလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တက်တယ်။ ဦးကျော်သာညွန့်တို့ . . . မဟာသမ္မတရာဇာ၏ဇနီး မြသန္တာ အုတ်ဂူကိုရှာတဲ့အခါမှာ အဲဒီနေရာရဲ့ နံရံပေါ်မှာရေးထားတဲ့စာသား . . . မင်းသားကြီးရွှေဘန်း မှာကြားတဲ့ စာသားလေးကို ကျွန်တော်တွေ့လို့ . . . အဲဒါကို ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ ဦးဝေဟင်အောင် တို့လို့ ဌန်ကရိုင်း ကျချင်မှကျမယ်။ အဲဒီမှာ ဘာပြောလဲဆိုရင် စကားလုံးတိုင်းမှာ အဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်။ “နောက်သားနောင်လူ၊ ရခိုင်သူတို့၊ အယူမပြောင်း၊ ငါ့လမ်းကြောင်းကို ကောင်းကောင်းလိုက်နာ၊ ပြည်ဓညာကို၊ တစ်ခါမုချ၊ ငါရို့ရအံ့” ဆိုတာကိုရင်ထဲမှာ ဆိုကြည့်ပါ။ ကြက်သီးဖြန်းဖြန်းထသွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ လက်မလျော့နဲ့၊ ငါတို့လို ပြည်ဓညာကို တစ်ခါရအောင် ငါ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားကြ။ ရကိုရ,ရမယ်ဆိုတဲ့ သံဓိဋ္ဌာန် သူ့မှာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ အခု အချုပ်အခြာအာဏာအတွက် လုပ်တဲ့အခါမှာ နည်းလမ်းနှစ်သွယ်ရှိပါတယ်။ နေရာတိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်ပြောပါတယ်၊ တစ်ခုက နိုင်ငံရေးမှာ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော်လှန်တာ . . . တော်လှန်ရေးလို့ပြောပါတယ်။
လူထုကို ဗဟိုပြုပြီးတော့ . . . လူထုကိုစည်းရုံးပြီး ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် လုပ်တာ နိုင်ငံရေး လို့ခေါ်ပါတယ်။ လူထုနိုင်ငံရေး။ ကျွန်တော်တို့ အခု လုပ်နေတာ လူထုနိုင်ငံရေးပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပန်းတိုင်သည် တူပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော် . . . ၂၀၁၄ . . . ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ရခိုင် တိုင်ရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ပူးပေါင်းဖို့ရာ အဆင်ပြေတဲ့ကာလ . . . မလေးရှားကို ဖိတ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ဒီလိုမျိုး ဟောပြောပွဲ လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒီမှာ ပထမဆုံး ကျွန်တော် ပြောတဲ့ စကားအားလုံး၏ အနှစ်သာရသည် . . . အတွင်း-အပြင် ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်၊ လူမျိုးတိုင်းမှာ အန္တိမရည်မှန်းချက်ရှိတယ်၊ ရည်မှန်းချက်ပေါက်မြောက်ဖို့ အတွက် အတွင်း-အပြင် ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်၊ အပြင်သည် အပြင်အလုပ်ကို လုပ်၊ အတွင်းသည် အတွင်း အလုပ် ကိုလုပ်၊ အတွင်း-အပြင် ညီညွတ်သော တစ်နေ့သည် အန္တိမရည်မှန်းချက်ကို ပေါက်မြောက်အောင်မြင်တဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မလေးရှားကို ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . ထိုင်းကိုရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . စင်္ကာပူကို ရောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ပျံ့နှံ့နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . မလေးရှားအဖွဲ့တို့ ထိုင်းအဖွဲ့တို့ ဆိုတာမျိုး မလုပ်ကြပါနဲ့။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရောက်နေတဲ့ ရခိုင်အမျိုးသား အဖွဲ့ချုပ် ကိုဖွဲ့ပါ။ ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ကိုဖွဲ့ပါ။ ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ လည်း ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်ရန် လိုတယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ ညီညွတ်မှုကိုယူမယ်။ သို့သော် အခုကျွန်တော် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီမှ နှုတ်ထွက်တယ်။ ကျွန်တော်မျှော်မှန်းတဲ့ အတွင်းညီညွတ်မှုရှိလို့ နုတ်ထွက်သလား၊ မရှိလို့ နုတ်ထွက်သလား၊ သုံးသပ်ကြပါ။
ကျွန်တော်တို့ ဦးကျော်ဇောဦးလည်း ရေးပါတယ်၊ ဗဟိုချက်ဆိုတာ . . . တပ်ဦး ဆိုတာ . . . ။ တပ်ဦးပြိုကွဲခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Dream ပန်းတိုင်ကို သွားလို့ မရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိလို့ . . . သွားလို့ရောက်နိုင်တဲ့ အနေအထားရှိအောင် ကျစ်လစ်သော တပ်ဦးတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လိုအပ်လို့ . . . အချိန်ရှိလို့ . . . ဆိုတဲ့ သုံးသပ်ချက်ကိုသာ သုံးသပ်လိုရှိရင် . . . ။ ကျောက်ဖြူမှာ အားပေး ကြပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် မျှော်မှန်းချက် မပျောက်ဆုံးဖို့ လိုပါတယ်။ မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ကို တစ်လှမ်းချင်း တစ်လှမ်းချင်းသွားကြဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး၏ လိုလားချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြန်ကြည့်ရင် . . . အခုနက မင်းသားကြီး ရွှေဘန်းမတိုင်ခင် ကျွန်တော် တင်ပြခဲ့တဲ့ ငပေါလုံးတို့ . . . ဒီဘက်က ငသံဒွေ . . သူ့သား သက်နှင်းဝေ(ကို) ဟိုးဘက်က ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းတို့က အမရပူရမှာ သတ်ပစ်တဲ့အခါမှာ စစ်အင်အား လက်နက်အင်အား မပို့နိုင်လို့ အရေအတွက်ပြည့်ဝအောင် မပို့နိုင် လို့ သတ်ပစ်တဲ့အခါမှ သာလျှင်၊ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပြန်တော်လှန်ရမယ် ဆိုတဲ့အသိ၊ အဲဒီခါကျမှ အားလုံး သိပါ တယ်။ သူ့သမီးလည်း မြောက်ဦးက မြို့ဝန်နဲ့ပေးစား၊ “အဒါထွီး” လို့ သိကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တပ်ဦးကကျွံသွားပြီး၊ ခုနက သတိရလာလို့ တော်လှန်ရေးမျိုးစေ့တွေဖြစ်လာတဲ့အခါ . . . အခုထိ ငသံဒွေဆိုတဲ့ သစွာဖေါက်မျိုးရိုးကပဲ ပြန်ပြီး တော်လှန်ရေးကို စလာတဲ့အခါမှာ . . . အခု ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိပါတယ် . . . မြောက်ဦးမြို့ကို ၀ိုင်းပြီးသိမ်းဖို့ အောင်ပွဲဆင်ဖို့ကာလမှာတစ်ခါ ညီညွတ်မှုက ပြိုကွဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ သံသရာလည်တာ နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ် ရှိလာပါပြီ။ ဆိုတော့ . . . လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ဦး ဆရာတော် ဦးဥတ္တမတို့ ပြောခဲ့တဲ့အသုံးအနှုန်းတွေ ပြန်ကြည့်ပါ။ “လူဆိုတာ လုပ်သင့်လုပ် ထိုက်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်နိုင်မှ လူနဲ့တူတယ်” ။ အချိန်အရ ပေးထားတဲ့ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တဲ့ အချိန်ကာလမှာ လုပ်နိုင်မှ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ အခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့ သွားနေရတဲ့ ပန်းတိုင်အားလုံးကို သုံးသပ်လို့ရှိရင် လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် ကာလတစ်ခုဟာ လာမယ့် “၂၀၂၀” မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးရဲ့နှစ်ပေါင်း (၇၀)အကျပ်အတည်း . . . ရခိုင်တို့ရဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်ကြာ . . . ခုနက ဦးဝေဟင်အောင် လည်းပြောခဲ့တယ် . . . ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက် ငါးဆက်နီးပါးလောက် ဒုက္ခသုက္ခ ခံပြီးတော့ အဆင်းရဲတကာ့ အဆင်းရဲဆုံးဘ၀မှာ မဆင်းရဲသင့်ပါလျက်နဲ့ အခုလိုရပ်တည်နေရတဲ့ သခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်ဖြစ်ဆဲ လူမျိုး တစ်ယောက် လူမျိုးတစ်ဦး၊ လူမျိုးတစ်စု၊ လူမျိုးတစ်မျိုး . . . စဉ်စားရင် ရင်နာဖို့ ကောင်း ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့က . . . (၂၃၃)နှစ် . . . နောက်နှစ်ဆိုရင် (၂၃၄)နှစ် . . . ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်းမှာ ပြန်ပြီးတော့ ငါတို့ အချုပ်အခြာ အာဏာ ကို ဘယ်လိုရမှာလဲ . . . ။ ဒီလိုစိတ်မျိုး မွေးဖို့လိုတဲ့အခါမှာ . . . အခုနက ကျွန်တော်တို့ တင်ပြတဲ့အတိုင်း တော်လှန်ရေး၊ လက်နက်ကိုင်ရင် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး၊ လူထုကို စည်းရုံးရင် လူထုနည်းနဲ့ ဗဟိုပြုတဲ့နိုင်ငံရေး၊ အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဟာ အခု အချုပ်အခြာအာဏာကို ဘယ်လို ပြန်ရမှာလဲ၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား အာဏာကို ဘယ်လိုပြန်ရမှာလဲ၊ ဆိုတဲ့ နည်းမှာ သွားပြီး ဦးတိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အာဏာကိုရမယ့် နည်း ပေါင်းစုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူထုကို စည်းရုံးတယ် . . . လက်နက်ကိုင် တွန်းလှန်တယ် . . . အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတိုက်ပွဲကို ဆင်နွဲတယ် . . . ဆိုတာ အားလုံးသည် . . . ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကို သွားနေတယ် ဆိုတဲ့ သဘောတရား တစ်ခုကိုတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အခု ပြန်ကြည့်ရင် . . . မြို့ပေါ်ထက် ကျေးရွာလူထု များတာကို သဘောပေါက်ပါတယ်။
ကျေးလက်က မြို့ထက် ဆင်းရဲပါတယ်။ တစ်ခါက အမ်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ကြားဖြတ်ရွေး ကောက်ပွဲမှာ နိုင်လို့ ပုဏ္ဏားကျွန်းတို့ . . . ရွာတွေကိုဖြတ်ပြီး စစ်တွေလာတဲ့ အခါ . . . အများအားဖြင့် ကျေးလက်တွေက တိုးတိုးလေးလာပြောတဲ့ . . . အသက်ကြီးကြီး ပုဂ္ဂိုလ် အမျိုးသမီးကြီးတွေက ဘာပြောလဲ ဆိုရင် “လွတ်လပ်ရေး” ကို ဘယ်တော့ရမှာလဲ၊ “လွတ်လပ်ရေး” ကို ငါတို့ ဘယ်တော့ရမှာလဲ။ တိုးတိုးလေး ပြောတာပါ။ “လွတ်လပ်ရေး” ကိုလိုချင်တယ်။ အသက်ကြီးကြီးတွေ ဆင်းရဲဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး။ အဖိနှိပ်ခံ ဘ၀မှာ မနေချင်တော့ဘူး။ ဒီလိုလွတ်လပ်ရေးကို လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ ဒီအသက်အရွယ် (၈၀) (၇၀) ကျေးလက် လူထုရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဖြစ်တည်နေခြင်းပင်လျှင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးကို ပြန်သုံးသပ်ရမယ့်ကာလလို့ နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်မှုကို လိုချင်သလဲ၊ လွပ်လပ်တဲ့ဘ၀မှာ တန်းတူအခွင့်အရေးနဲ့နေချင်လို့ လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံကို တည်ထောင်လာပြီးခါမှ နှစ်ပေါင်း (၇၀)လည်း ကြာလို့ ပေးသင့်ပေးထိုက်တဲ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ ကာလကျော်လွန်ပြီးခါမှ . . . ဘာဖြစ်လို့ ပိုပြီးပြင်ထန်တဲ့ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်လာရသလဲ။ ရခိုင်ပြည်မှာလည်း အသက်ကြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ခံစားသလို . . . တိုင်းရင်းသားတိုင်းရဲ့ ရင်ထဲမှာ ခံစားရလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လွတ်လပ်ရေးကို ပြန်တောင်းရသလဲ။ အင်္ဂလိပ်ဆီမှာ ကျွန်ဖြစ်ခဲ့တယ် . . . ဗမာနိုင်ငံ တစ်ခုလုံး။ အခု တိုင်းရင်းသားတွေ ဗမာ ဆီမှာ ကျွန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားနေရရင် . . . ဗမာတွေက ပြန်သုံးသပ်ရမယ် . . . ငါတို့ ဘာမှားနေလဲ။ ပြန် သုံးသပ်ရမယ့် ကာလ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးသည် အမြဲတမ်း ထိတွေ့နေတဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ . . . လူထုနည်းနဲ့ . . . ကျွန်တော်တို့၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်၊ အတိတ်ဘ၀မှာ ဆုံးရှုံးခဲ့သော အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြန်ရဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံရေးပါတီကို တည်ထောင်သလို . . . ဒီနည်းက ဖြင့်တော့ အလုပ်မဖြစ်၊ လက်နက်ကိုင် မှသာ ငါတို့၏ ဆုံးရှုံးနေသော အချုပ်အခြာအာဏာကိုရမယ်လို့ ယုံလို့ လက်နက်ကိုင်တယ်။ ပန်းတိုင်ကတော့ အတူတူပါပဲ။
ဒါကြောင့် လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . ငါတို့ ဘယ်လောက်များ တိုင်းရင်းသားတွေ ကို ပေးရန်လိုသလဲ။
ပြည်ထောင်စုကိုလည်း မပြိုကွဲစေချင် . . . မြေပုံကို ဒီအတိုင်းလည်း ထားချင်တယ်၊ တိုင်းရင်းသားတွေရင်ထဲမှာလည်း အတူတူ လွတ်လပ်ခြင်းအရသာကို မခံစားရသေးလို့ ယူဆယုံကြည်နေတယ်၊ တန်းတူအခွင့်အရေးမရှိ၊ အုပ်ချုပ်ခံဘ၀မှာ နေရ တယ်လို့ ယူဆနေရင် . . . ကျွန်တော်တို့ တစ်စုံတစ်ခုများ အပေးအယူ လုပ်သင့်သလား ဆိုတဲ့ . . . လက်ရှိနှစ်ပေါင်း (၇၀) နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခ၏ ထွက်လာတဲ့ အသံတွေကို သုံးသပ်ရန် မလိုဘူးလား။
ဦးဝေဟင်အောင်ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပါ။ (၄၈)၊ (၅၈)၊ (၆၂) မှာ အာဏာသိမ်း တယ်။ ပထစ လက်ထက် မတိုင်ခင်မှာ ဦးနေ၀င်းကို အိမ်စောင့်ခန့်ထားတယ်။ (၆၂)ကနေ (၈၈)ထိ၊ (၈၈)ကနေ (၂၀၁၀)ထိ၊ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေတစ်ခု။ အများကြီး မမျှော်လင်ခဲ့ပါ။
၂၀၁၅ မှာ လူထုအစိုးရ၊ ပြည်သူ့အစိုးရမတိုင်ခင် အများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ အခု ကိုယ်တိုင် ကြုံရတဲ့အခါ ပိုပြီးတော့ ခံစားရတယ်။ အဲဒီသံသရာက မထွက် သေးပါ။ ၁၉၄၈ ကနေတက်လာတဲ့ ဗမာ အမျိုးသားတွေပါတဲ့ အစိုးရ၊ ယင်းမူဝါဒ၊ ယင်းကျင့်စဉ်၊ ယနေ့အထိရှိတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခသည် အမြင့်ဆုံး၊ နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲသည် အပြင်းထန်ဆုံး၊ ယင်းကာလမှာ ရခိုင်ပြည်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
ဘာကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီတည်ထောင်ပါသလဲ။ ဦးဝေဟင်အောင်လည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ အာဏာလိုချင်လို့၊ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဒီနည်းနဲ့ ရမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့ ဒီနည်းကိုသုံးတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျွန်တော် ပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က သေနတ်ကိုင်တဲ့ လူမဟုတ်။ သေနတ်မကိုင်သော်လည်း ပါးစပ်က ထွက် လာတဲ့ စကားတလုံးသည် ကျည်ဆံထက်ပြင်းရမယ်။ ဒါကြောင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို ကျည်ဆံတစ်တောင့်မှ မသုံးဘဲနဲ့ ရအောင်ယူမယ်။ ရင်ထဲမှာ အမျိုးသားညီညွတ်မှုစိတ်၊ ကိုယ့်ပြည်ကို ကိုယ်တို့ ကိုယ်တိုင် အုပ်ချုပ်ချင် တဲ့ စိတ်၊ ရက္ခိတစိတ် တည်ရှိနေရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်မဟုတ်။ ရုန်းကန်လိုသောစိတ် လူတိုင်းမှာ ရှိနေဖို့ လိုတယ်။ ကျားကုပ်ကျားခဲ ကြိုးစားနေဖို့လိုတယ်။ အခု ကျွန်တော့်တို့ အသက်ကြီးပြီ၊ (၆၁)။ (၆၀)။ (၆၀)အရွယ်တို့ ရင်ထဲမှာ (၆၀)အရွယ်တို့ ရင်ထဲအလျောက် ရှိဖို့လိုပါတယ်။ (၁၀)စုနှစ်၊ အသက်(၂၀)အရွယ် တွေ ရင်ထဲမှာ စွဲနစ်သွားအောင် . . . ငါတို့၏ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ တာဝန်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပြီးလုပ်ကြ၊ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး ချီတက်၊ ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်လုပ်ကြ . . . ဆိုတဲ့ ဒီရင်ထဲက ရှိသင့်တဲ့ မာန၊ ခံယူချက်၊ ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက် တွေကို မပျောက်အောင် ကျွန်တော်တို့ မိဘပြည်သူများ ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ နုလုံးသားထဲမှာသွင်းနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့၏ တော်လှန်စိတ်မပျောက်။ ယင်းသည်ပင်လျှင် အချုပ်အခြာ အာဏာသည် လက်တကမ်းမှာရှိ တယ်ဆိုတာကို . . . ကျွန်တော်တို့ ယုံကိုယုံ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရခိုင်ကို လက်ရှိ တိုင်းရင်းသားများအားလုံးထဲမှာ အကြောက်ဆုံး။ ရခိုင်တို့မှာ လက်ညိုးထိုးပြစရာ သမိုင်းသက်သေရှိတယ်။ သီးသန့်နယ်မြေရှိတယ်။ လုံလောက်တဲ့ လူဦးရေနဲ့ စီးပွားရေး ရှိတယ်။ ကမ္ဘာ၏ စစ်ရေးဆိုင်ရာ Military အခုနက Politics, နောက် Geo-politics, ပထ၀ီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ဗဟို၊ စီးပွားရေးဗဟို Social Economics နဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီဗဟိုချက်မှာ ကျတယ်။ အဲဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ (၁၀)စုနှစ် တစ်စု လောက်က စကျလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခု အားလုံး ကမ္ဘာအရေး၊ မြန်မာ့အရေး၊ ရခိုင်အရေးကို သုံးသပ် တိုင်းမှာ . . . ကမ္ဘာမှာ ရခိုင်သည် အခုရှေ့တန်းကို ထွက်လာတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ရခိုင်တို့၏ အနေအထားကို ပိုပြီး အာရုံစိုက် လာကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်ဝန်းကျင်လောက် ရောက်လာတဲ့အခါ . . . ။ အခု ကျွန်တော်တို့က ဟိုတုန်း ကလည်း ယုံပါတယ် . . . ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့ လို အင်မတန် တန်ခိုးထွားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရခိုင်ပြည်ကိုလာရင်၊ “မိုးရွာချတယ်” ၊ ရခိုင်ပြည်မှာ “နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များ” ရှိတယ်၊ “စောင့်ရှောက်တယ်” မဟာမြတ်မုနိကုန်းမှာလည်း . . . အဲဒီလိုတွေ ရှိတယ်။
ကျွန်တော်တို့ (၉၉)လတ္တံ့ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် “အလယ်တရိုး ထီးဖြူမိုး” မယ် လို့ ဆိုတယ်။ ကျောက်ဖြူ . . . သူ့ဟာသူ ဗဟိုချက်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီလတ္တံ့မှာ ပြန်ကြည့်။ “မဟာမြတ်မုနိကို စိနပြည်က လာပင့်မယ်၊ ပင့်ပြီးရင်ရခိုင်ကို ပြန်အပ်မယ်” ။ ဆိုတော့ . . . ပြန်ပြီး ကျွန်တော်တို့၏ လမ်းကြောင်း သည် . . . ၂၀၁၀ နီးပါးလောက်က၊ မတိုင်ခင်လောက်က ပွတ်ရှမှုသည် ၁၀-စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ ထိပ်ပိုင်းကို ရောက်သွားတယ်။ ဒါကြောင့် ကုလား-ရခိုင် ပဋိပက္ခသည် မြင့်လာတယ်။ ရခိုင်တို့၏ အလယ်တည့်တည့်မှာ ကမ္ဘာစီးပွားရေးဗဟိုချက်ကို ရောက်မယ့်လမ်းကြောင်းသည် ခုနက ကမ္ဘာမဟာအင်အားကြီး နိုင်ငံများ၏ ပွတ်ရှမှု ဖြစ်လာတယ်။
မကြုံစမဖူး ကျွန်တော်တို့၏ ဘင်္ဂလား သမုဒ္ဒရာ ပင်လယ်ပြင်အောက်ထဲမှာ ဓါတ်ငွေသိုက်တွေ များစွာ တွေ့လာတယ်။ ယခု ဗမာပြည်ကိုတွေးရင်၊ ရခိုင်ပြည်၊ ရခိုင်ပြည်ကို တွေးရင် . . . ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော၊ မယူကမ်းဒေသ . . . ရခိုင်နိုင်ငံရေးတစ်ခု၊ ဗမာ့နိုင်ငံရေးတစ်ခုလုံး၏ “ထိပ်မှာ” ရှိနေတယ်။ ဒါကြောင့် . . . ပြန်ကြည့်ပါ။ လက်နက်ကိုင် အမျိုးသားတော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း . . . အရင်က ထိုင်းနယ်စပ်က လူဦးရေ နည်းနည်းပါးပါးလောက်နဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး နယ်မြေထဲကို ၀င်လာတဲ့ပါတီတွေ အထူးသဖြင့် ရသေ့တောင်နယ်က ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်။ သို့သော်လည်း ပန်းတိုင်မရောက်ခဲ့ကြပါဘူး။
အခု လွန်ခဲ့သည့် ကိုးနှစ်-ခုနစ်နှစ်လောက်က ထွန်းပေါ်လာတဲ့ “ရက္ခိုင့် တပ်မတော်” ၊ . . . အားလုံးသည် အိပ်မက်တစ်ခုဆီကို သွားနေတယ်။ အဲသည်အိပ်မက်သည် ခုနက မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အားအနည်းဆုံးအချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ အခွင့်အရေး ကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ . . . ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ပြောခဲ့သလို – “ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူနိုင်မှ လူနဲ့တူတယ်” ၊ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွင့်အရေးကို ရအောင်ယူဖို့ အချိန်သည် လက်တကမ်းမှာရှိနေသည့်အခါမှာ- ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ထဲက ရခိုင်တို့၏နိုင်ငံရေးဗဟိုချက်ကို ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ- ဗဟိုမှာ ကန်အားများနေတယ်။ အချင်းချင်းပဋိပက္ခများနေတယ်။ ဗိုလ်ချင်းပျံ မြောက်ဦးကို သိမ်းခါနီးမှာ ဖြစ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး . . . ကျွန်တော်တို့ ကြုံနေကြရပြီ။ ဒါကြောင့် ဗဟိုချက် . . . ခိုင်မာသော၊ ညီညွတ်သော၊ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော၊ တပ်ဦးတစ်ခု လိုအပ်တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ ကျွန်တော်နောက်ကို ဆုတ်ပါတယ်။ နောက်ကို ဆုတ်ရင်းနဲ့ တည်ဆောက်ပါတယ်။
ရှေ့ကိုသွားဖို့အချိန် လုံလောက်တဲ့ အတိုင်းအတာ ကျွန်တော်တို့ ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဟာ ဒီနေ့ နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်ကြာက စပြီးတော့ . . . ဦးဝေဟင်အောင် တို့လည်း ပြောပါတယ် . . . နှစ်ပေါင်း (၄၀)၊ ၁၇၈၄ မှ အင်္ဂလိပ် သိမ်းတဲ့ ၁၈၂၃-၂၄ ထိ နှစ်ပေါင်း (၄၀)၊ အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ခေတ်ကောင်းကာလ၊ အဲဒီကာလ တိုင်းမှာ ဖြစ်တည်လာတဲ့ တော်လှန်စိတ်၊ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တော်လှန်စိတ်၊ အားလုံးရင်ထဲမှာ စွဲငြိသွားမယ်ဆိုရင် . . . ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခုကို ရလာမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီလိုရသွားအောင် ဦးဝေဟင်အောင်တို့ ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းသည်ပင်လျှင် ကျွန်တော်တို့၏ ပန်းတိုင်၊ ရည်မှန်းချက်သည် ကျွန်တော်တို့၏ မျိုးဆက်သစ်တို့၏ ရင်ထဲမှစွဲငြိသွားပြီ လို့ ကျွန်တော်တို့ ယုံပါတယ်။
ဒီလိုစွဲငြိသွားမှ လက်ဆင့်ကမ်းသွားမှ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းတဲ့ “တခါမုချ . . . ပြည်ဓညာကို၊ တခါမုချ၊ ငါတို့ရအံ့” ဆိုတဲ့ မဆုတ်နစ်တဲ့ သံဓိဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သံဓိဋ္ဌာန်သည် ကြွရောက်လာကြတဲ့ ကျွန်တော်တင်ပြလို့ နားထောင်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရင်ထဲမှာ၊ နှလုံးထဲမှာ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရှိခဲ့လို့ ရှိခဲ့ကြမယ်ဆိုရင် . . . ဘာကြောင့် ကိုယ့်ပြည် ကိုယ်မင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံနဲ့ နေထိုင်လာခဲ့တဲ့လူမျိုး၊ ဘာကြောင့် ပြိုကွဲချိန်တန်တဲ့အခါ ပြိုကွဲသွားရတယ် ဆိုတဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ်ကြာသမိုင်းကို ပြန်ပြီး ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်း ဆင်ခြင်နိုင်မှသာလျှင် ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေကို တစ်ဦးချင်းက တာဝန်ယူပြီးတော့ . . . ဒီလိုဖြင့် သမိုင်းတွင် ငါတို့ကြုံခဲ့ရတယ်၊ ငါတို့မျှော်မှန်းတဲ့ပန်းတိုင် ရည်မှန်းချက်ကို မင်းတို့ လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ မရ-ရအောင် ယူကြ ဆိုတဲ့ တာဝန်ပေးချက်များ ရှိလာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရခိုင်မှာ- ဒီလိုစာပေ ဟောပြောမှုတွေရှိပါတယ်။ တခြားလူမျိုးတွေမှာ မရှိလို့လည်း . . . ကျွန်တော်တို့လို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မရှိ လို့လည်း ပြောစမှတ်ပြုကြပါတယ်။ ဗမာတွေမှာတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရေး ပါတီက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ . . . ကျွန်တော် ထင်ပါတယ် . . . လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ဦးဝေဟင်အောင်တို့လို စာရေးဆရာတွေ စစ်တွေညိုသန့် တို့လို့ စာရေးဆရာတွေ၊ ပြည်သူတို့ထံသွားပြီး သမိုင်း၏ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် . . . ရှေ့ကိုသွားဖို့ရာ မျှော်မှန်းချက် တွေကို နားထဲမှာ စွဲဝင်သွားစေအောင် . . . တစ်ရွာဝင်၊ တစ်ရွာထွက်၊ ယခုလို စာပေဟောပြောပွဲတွေကို ဖန်တီး ပြီးတော့ ဇာတိသွေး၊ ဇာတိမာန်မပျောက်အောင်၊ အမျိုးသားရည်မှန်းချက်တွေကို ကိန်းဝပ်အောင်၊ ဆွေးနွေးပေး စေခဲ့ခြင်းသည်ပင်လျှင် . . ကျွန်တော်ထင်တယ် . . . တာဝန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အလွန့်အလွန် တာဝန်ကျေ ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်း စာရေးဆရာကြီးတွေ ခုလိုစီစဉ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲတွေကို စီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို အမြဲတမ်းအားပေးပါတယ်။ လေးစားပါ တယ်။ ဒီလိုပဲ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲ စာရေးဆရာတွေကို၊ အခုလိုစီစဉ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျေးဇူးတင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါသည် အမျိုးသား ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်အောင် နိုင်ငံရေးအရ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ နားလည် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချုံ့လိုက်ရရင် . . . ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရင်ထဲတွင် နှစ်ပေါင်း (၂၃၃)နှစ် . . . နောက်နှစ် ဆိုရင် (၂၃၄)နှစ် . . . ဒီလိုမျိူး အခမ်းအနားတွေကို ရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့၏ တာဝန်၊ ကျွန်တော်တို့၏ပန်းတိုင်၊ ရည်မှန်းချက်ကို ရင်ထဲမှာ . . . အားလုံးသူတို့၏ ရင်ထဲမှာ . . . စွဲငြိသွားစေ အောင် မှတ်မိသွားအောင် ဒီလိုဟောပြောပွဲတွေက သင်ခန်းစာကို ရယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင် . . . စီစဉ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက် အောင်မြင်တယ် လို့ ကျွန်တော်ယုံပါတယ်။
ဒါကြောင့် နောင်နှစ်များတွင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီး ကျင်းပပေးကြပါ။ ရသေ့တောင်မြို့မှာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ . . . ဗဟိုပြုနိုင်လောက်တဲ့ ကျေးလက် တိုက်နယ်တွေမှာ သွားပြီး ကျင်းပပေး စေလိုပါတယ်။ ဒီလို ကျွန်တော်တို့ မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာ ယနေ့လို အခမ်းအနားများကို ကျင်းပပေးခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ တစ်မျိုးသားလုံးထားအပ်သည့် ပန်းတိုင်ရည်မှန်းချက်ကဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိ ကျားကုပ် ကျားခဲ အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ အသိတွေကို ဖလှယ်နိုင်မယ် လို့ ယုံပါတယ်။
အားလုံးကို ချုံ့ကြည့်ရရင် . . . ကျွန်တော်တို့ကလည်း . . . ရှင်ဘုရင်ခေတ်က ဖြစ်ပျက်လာတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကို စီကာပတ်ကုံးတော့ မပြောတော့ပါ။ ဖြစ်ပျက်မှု များကတော့ သမိုင်းမှာ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်သွား တဲ့အခါမှာ- ကျွန်တော်တို့ချီတက်တဲ့ ခရီးလမ်းကြောင်းမှာ အတတ်နိုင် ဆုံး တတပ်တအား အုပ်တစ်ချပ် သဲတစ်ပွင့်အဖြစ် ပါပေးကြရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက် ပြည်သူတွေကို ပိုပြီး မေတ္တာရပ် ခံလိုပါတယ်။ တကူးတက အချိန်ကုန် ငွေပန်းလူပန်းပြီး ဒီမှာ လာပြီး နားထောင်၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာ ရောက်တဲ့အခါ ပြန်ပြီး သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ကိုယ့်လူတွေကို ပြန်ပြောပြ စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်ပြည်လုံး လှည်းနေလှေအောင်း အားလုံးမကျန် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ရှိ နေမှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ရှိ အကျဉ်းကျပ်အတွင်းကနေ ရုန်းထွက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်တွေးကြည့်ရင် . . . ဦးဝေဟင်အောင် ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ အရှေ့ဖက်က ဖြစ်လာတဲ့ဖိအား၊ အနောက်ဖက်က ဖိလာတဲ့ ဖိအား ကြားမှာ . . . ကျွန်တော်တို့ အကျဉ်းအကျပ်ကြားထဲမှာ ရောက်နေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီအချိန်ဒီကာလမှာ ကျွန်တော်တို့ ကျောချင်းကပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအသိရှိရှိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ သမိုင်းထဲမှာ ၀ဲလည်လည်မဖြစ်ဘဲ နဲ့ နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ပြန်ပြီးတော့ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ဒေသကို ပြန်လည်ဆောက်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတိပေးချက်တစ်ခုကိုတော့ခါ ကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ တင်ပြလို ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အပိုင်းက ဒီလောက်ဆိုရင် ကျဉ်းကျဉ်းကလေးနဲ့ လိုရင်းကို ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် . . . ဒီလောက်ပဲ တင်ပြခဲ့တာကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ အားလုံး တော်လှန်ရေး သတိနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်မှန်းတဲ့ ပန်းတိုင် ရည်မှန်းချက်ကို ပေါက်မြောက်အောင် တာဝန်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်ပြီးတော့ မျိုးဆက်သစ်များကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါလို့ တင်ပြရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါကျတာအေးမောငျ၏ ရသတေ့ောငျ ဟောပွောခကျြ
ဒေါကျတာအေးမောငျ ရသတေ့ောငျမွို့ တောငျရငျးတနျးရပျကှကျ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးမှာ (၁၅-၀၁-၂၀၁၈) ရကျနကေ့ ဟောပွောခဲ့တဲ့ဟောပွောခကျြကို အသံဖိုငျနဲ့ (လုံးကောကျ) မွနျမာဘာသာပွနျ စာတနျးထိုးထားတာကို ဗီဒီယိုဖိုငျပွုလုပျပွီး ပူးတှဲပေးထားပါတယျ။ အဲသညျ ဟောပွောခကျြ မွနျမာဘာသာပွနျကို ဒီပို့ဈအောကျမှာ အစအဆုံး ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
ဒေါကျတာအေးမောငျကို စဈတှထေောငျအခြုပျ ပို့နိုငျအောငျ ပွုလုပျတဲ့ စှပျစှဲခကျြ နှဈခုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ပွောဆိုမှုတှဟော ဒေါကျတာအေးမောငျအနနေဲ့ သဘောတရားပိုငျးအရ ပွောခဲ့တာဖွဈကွောငျးတှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီအခကျြနှဈခကျြကို အကဉျြးခြုပျ ပွနျပွောရရငျတော့ဒီလိုပါ။
(တဈ) ဗမာတဈနိုငျငံလုံး အင်ျဂလိပျကြှနျဖွဈခဲ့ဖူးတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှအေနနေဲ့ တနျးတူညီမြှနခှေငျ့ရမယျ ထငျလို့ လှတျလပျရေး အတူတူ ယူလာခဲ့ပွီးခါမှ အဲဒီအတိုငျးမဟုတျပဲ ငါတို့ဟာ ဗမာကြှနျတှေ ဖွဈနပေါလားဆိုပွီးတော့ ခံစားနရေရငျ၊ ဗမာတှကေိုယျတိုငျ ငါတို့ဘကျက ဘာတှမှေားနသေလဲ ဆိုပွီးတော့ စဉျးစားဖို့ လိုအပျတယျ။
(နှဈ) ရခိုငျတို့ရဲ့အခြုပျအခြာအာဏာကို ရရှိရေးအတှကျ ကွိုးပမျးကွရာမှာ နညျးလမျးနှဈသှယျရှိတယျ။ ကြှနျတျော (ဒေါကျတာအေးမောငျ)တို့ အနနေဲ့ လူထုနညျးအားဖွငျ့ နိုငျငံရေးလုပျတယျ။ ဒီနညျးကို မယုံကွညျတဲ့သူတှေ ဒီနညျးဟာအလုပျမဖွဈဘူးလို့ ယူဆတဲ့သူတှကေတော့ လကျနကျကိုငျတယျ။ ဒီနှဈလမျးကိုသှားကွသူတှရေဲ့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကတော့ အတူတူပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒေါကျတာအေးမောငျရဲ့ ဟောပွောခကျြ မွနျမာပွနျစာသား အပွညျအစုံကို အောကျမှာ ဖျောပွထားပါတယျ။
အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဆိုတော့ . . . ကြှနျတျောက စာရေးဆရာ မဟုတျပါ။ စာရေးဆရာ မဟုတျတော့ ရတုရကနျတှေ ပြို့တှေ လင်ျကာတှနေဲ့ စီကာပတျကုံး ရယျစရာငိုစရာတှကေို ပွောလို့ရတဲ့လူလညျး မဟုတျတဲ့အခါမှာ ကြှနျတျော ဆှေးနှေးတဲ့ အကွောငျးအရာမြားဟာ မာမာကွောကွောမြားလညျး ဖွဈလာနိုငျပါ တယျ။
ဒါကွောငျ့ . . . ကွိုပွီး မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။ စာရေးဆရာတှလေို အရမျး တငျးမာတဲ့ အခြိနျမှာ ပြော့ပြောငျးသှားအောငျ သီခငျြးဆိုလို့လညျး မရပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဒီအခမျးအနားကို ကြှနျတေျာ့အား ဖိတျကွား တဲ့အခါမှာလညျး ကြှနျတျော တျောတျော စဉျးစားပါတယျ။ တဈခြို့ ဖစျေ့ဘုတျတှမှောလညျး စာရေးဆရာလညျး မဟုတျ၊ ဟိုသှားဒီသှား ပါတီတဈခုထောငျဖို့ စညျးရုံးရေး ဆငျးနသေလားမသိ ဆိုပွီးတော့ သံသယမကျြလုံးနဲ့ ရေးတာကိုလညျး ခံရပါတယျ။
ဆိုတော့ . . . ကြှနျတေျာ့ကို အခမျးအနားမှူးက ကိုယျရေးရာဇဝငျတှကေို တောငျးပါတယျ။ ကြှနျတျောကလညျး မပေးဖွဈခဲ့တာကွောငျ့ ကိုယျရေးရာဇဝငျတှကေို နညျးနညျးလောကျ ပွောပွီးတဲ့အခါမှ ကြှနျတျောပွောခငျြတာလေးကို ပွောပါမယျ။ ကြှနျတေျာ့နာမညျ အေးမောငျပါ။ မယူကမျး အောငျဆိပျမှာ ၁၉၅၇ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ (၁)ရကျနမှေ့ာ မှေးပါတယျ။ ဗမာလို ၁၃၁၉-ခုနှဈ တနျဆောငျမုနျးလဆနျး (၁၀)ရကျပါ။ ညီအဈကို မောငျနှမ သုံးဦးရှိပါတယျ။ ကြှနျတျော အကွီးဆုံးပါ။ ကြှနျတေျာ့မှာ သားနှဈယောကျ ရှိပါတယျ။ မွေးနှဈယောကျ ရှိပါတယျ။ (၆၁)နှဈထဲမှာ ရောကျပါပွီ။ (၂၅)နှဈလောကျ အစိုးရဝနျထမျး လုပျပါတယျ။ အဲဒီ ကာလမှာလညျး ကမ်ဘာ့ကုလသမဂ်ဂ စားနပျရိက်ခာ နှငျ့ စိုကျပြိုးရေးအဖှဲ့မှာ ငါးနှဈလောကျ အကွိမျကွိမျ လုပျပါ တယျ။ နောကျ ပငျစငျယူပွီးခါ ရခိုငျတိုငျးရငျးသားမြား တိုးတကျရေးပါတီကို တညျထောငျရာမှာ ကွားလူဖွဈတဲ့ ကြှနျတျော ကို ဥက်ကဋ်ဌ တငျကွပါတယျ။ ၂၀၁၀ ရှေးကောကျပှဲ မှာ အပျေါမှာ (၁၈)၊ အောကျမှာ (၁၈) နရော နိုငျပါ တယျ။ တိုငျးရငျးသားရေးရာဝနျကွီး တဈနရော ပါ,ပါတယျ။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၁၅ ကို ဖွတျရနျကာလမှာ ALD နှငျ့ RNDP ကို ပေါငျးပွီးတော့ ANP ကို တညျထောငျ ပါတယျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလ (၂၇)ရကျနေ့ ကြှနျတျော ရခိုငျအမြိုးသားပါတီကနေ ဥက်ကဋ်ဌတာဝနျကရော ပါတီဝငျအဖွဈကပါ နှုတျထှကျပါတယျ။ အခု နှုတျထှကျပွီးစ နှဈလဝနျးကငျြထဲမှာပါ။ ဒါတှဟော ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ကိုယျရေးအခကျြအလကျအကဉျြးပါ။ အခုလကျရှိမှာ ကြှနျတျောဟာ အမျး မဲဆန်ဒနယျမွကေ ပွညျသူ့ လှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ အခု . . . ခေါငျးစဉျနဲ့ ပတျသကျလို့ ပွနျကွညျ့ပါမယျ။ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈ အခြုပျအခွာ အာဏာ ကဆြုံးတဲ့နနေဲ့ ပတျသကျလို့ ကငျြးပတဲ့ ရသတေ့ောငျ မွို့နယျက မယေုရငျသှေး ပရဟိတအသငျးနဲ့ ယခုပါဆို ကြှနျတျော နှဈကွိမျလာပွီး ယခုလို ဆှေးနှေးဖူးပါတယျ။ ဒီနေ့ . . . အခြုပျအခွာအာဏာကဆြုံးခွငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ ဟောပွော ဆှေးနှေးတာဖွဈပါတယျ။
ဦးဝဟေငျအောငျ . . . ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ထငျပါတယျ၊ ၂၀၁၅ မှာ ရှေးကောကျပှဲ မနိုငျလို့ အားနတေဲ့ ကာလမှာ ဆရာတျော ဦးဥတ်တမ ပြံလှနျတျောမူတဲ့နနေဲ့ ပတျသကျလို့ ထိုငျးကို ဖိတျတဲ့အခါ အတူတူ . . . ကြှနျတျောထငျတယျ . . . တဈနရောမှာ ဟောပွော ဖူးပါတယျ။ လူငယျပရဟိတသမား၊ နိုငျငံရေး နဲ့နှယျသော ဇာတိသှေး ဇာတိမာနျကို တကျကွှ အောငျ ဟောပွောပို့ခနြိုငျတဲ့ ခေါငျးဆောငျတဈဦးပါ။ အဲဒီ ကာလကတညျးက ကြှနျတျောတို့ သဘောပေါကျ ပါတယျ။ အခု ကြှနျတျောရှမှေ့ာ တဈနာရီ ကြျောကြျော လောကျ စီကာပတျကုံး သမိုငျးသငျခနျးစာတှေ၊ ကြှနျတျောတို့ လူငယျတှအေတုယူသငျ့တဲ့ အကွောငျးအရာ လေးတှကေို ဟောပွောပို့ခပြေးတဲ့အခါမှာ ကြှနျတျော . . . တျောတျောလေး . . . အခုနက ဆရာ ဦးဝဟေငျအောငျရဲ့ ဟောပွောပို့ခခြကျြတှကေို အလေးအနကျထားပွီးတော့ ကြှနျတျော အသံဖမျးထားပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ကဏ်ဍကတြော့ . . . ကြှနျတျော ဘာပွောရမလဲဆိုတာ . . . ကြှနျတျောကတော့ ခေါငျးစဉျကို ဒီကိုရောကျမှပဲ ဘာပွောရမလဲဆိုတာကို စဉျစားပါတယျ။ ဘယျမွို့မှာမဆို ကြှနျတျော ကွိုပွီးဘာမှ မလုပျထားတတျပါဘူး။ ရောကျတဲ့အခါမှ ဖွဈလာတဲ့ ခံစားခကျြနဲ့ ကြှနျတျော ပွောပါတယျ။ အခုလညျး ပွနျကွညျ့ တဲ့အခါမှာ . . . (၂၃၃)နှဈသညျ တကယျတော့ စိတျပကျြအားငယျနစေရာမလို။ (၂၃၃)နှဈကို ဘယျလို ကဉျြး အောငျ တဈနညျးအားဖွငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာကဆြုံးခဲ့ရရငျ ပွနျရအောငျ ဘယျလိုလုပျမလဲ၊၊ အဲသလို မိမိတို့၏ စိတျသန်တာနျထဲမှာ စှဲမှတျစခေငျြလို့ လာပွောတာဖွဈပါတယျ။
ဝမျးနညျးနလေို့ . . . ငိုကွှေးနလေို့ . . . အတိတျမှာ ဖွဈပကျြခဲ့တာတှကေို နောငျတရနလေို့ တော့ခါ . . . နောငျတရနဖေို့တော့ခါ လိုပါတယျ။ သငျခနျးစာယူနဖေို့ လိုပါတယျ။ သို့သျော တမျးတနရေုံနဲ့ တာဝနျမကနြေိုငျပါဘူး။ အဲဒါတှကေိုပွောခငျြလို့ ဖိတျမန်တကပွုတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေ . . . လာဖို့လညျး အားနတေယျ . . . မနကျဖွနျဆိုရငျ “လလညျးကှယျ ပွညျလညျးဆုံး” ဆိုတဲ့ အခမျးအနားကို ကြှနျတေျာ့ကို ဖိတျပါတယျ။ “တိမျညို” မှာ (၆)နာရီ၊ “နနျးရာကုနျး” မှာ (၁၀)နာရီလောကျ ဖွဈမယျ ထငျပါတယျ။
ဒီနဆေို့ လှတျတျောပွနျစပါတယျ။ ကြှနျတျောလှတျတျောမသှားဘဲ တဈပတျ လောကျ ခှငျ့ယူ ထားပါတယျ။
ဆိုရငျ . . . ပွနျစပါမယျ။
ကြှနျတျောတို့ . . . ဆရာဦးဝဟေငျအောငျ ပွောခဲ့သလို ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံ ဆုံးသှားတာ မဟုတျ။ မွရှေိတယျ၊ လူရှိတယျ၊ ယဉျကြေးမှုရှိတယျ၊ အမှအေနှဈရှိတယျ။ အခြုပျအခွာအာဏာဆုံးသှားတာ။ ဒါကို အားလုံး လကျခံဖို့လိုပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာပွနျရရနျအတှကျ ကြှနျတျောတို့ ကွိုးစား လာတာ သမိုငျးနဲ့ ခြီပါ တယျ။
နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈမှာ . . . ယခု(၂၃၃)နှဈတိုငျတိုငျ လို့ ပွောလို့ရပါတယျ၊ တျောလှနျရေး . . . ဆုံးရှုံးပွီးအခြိနျကစပွီး တျောလှနျရေးကို လုပျလာခဲ့တာ . . . ပွနျကွညျ့ရငျ . . . ဦးဝဟေငျအောငျတို့ ပွောတဲ့ . . . တောငျမငျးကွီးကြျောထှေး တို့ . . . ကြှနျတျောတို့ အမျးမှာဆိုရငျ ဒလကျ ဘကျမှာ ငပေါလုံးတို့ . . . အဲဒီလိုနဲ့ အရှဘေ့ကျကိုကြျောပွီးတော့ ဒီယန်တရားထဲမှာ ဝငျပါလာတဲ့ ငသံဒှတေို့ရဲ့ မြိုးရိုး . . . ခငျြးပြံ . . . တျောလှနျရေး မြိုးစလေ့ေးကို ရတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကြှနျတျောတို့သညျ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈတိုငျပါပွီ၊ သို့သျော ယနထေ့ကျထိ ရုနျးကနျကွိုးစားနဆေဲ ဖွဈတယျဆိုတာကို . . . ။ ယခုကွှရောကျလာတဲ့ ပရိသတျတှကေို ကွညျ့တဲ့အခါ လူငယျတှေ မြားမြားပါတယျ။ လူငယျထဲမှာ အမြိုးသမီးငယျတှေ အမြားကွီးပါတယျ၊ နောငျ မိခငျလောငျးတှေ ဖွဈမယျ့ . . . သားသမီးတှကေို မြိုးစမှေ့နျကို ရောကျအောငျ၊ ပဲ့ပွငျပုံသှငျးနိုငျမယျ့ အနာဂတျခေါငျးဆောငျတှေ . . . ။ အားရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီနရောမှာ . . . ဦးဝဟေငျအောငျ(တို့ ပွောသ)လို မငျးသားကွီး ရှဘေနျး မှာခဲ့တဲ့ စကားလေးတဈခုကို ကြှနျတျောပွောခငျြပါတယျ။ မနကေ့လညျး ဖစျေ့ဘုတျမှာ တကျတယျ။ ဦးကြျောသာညှနျ့တို့ . . . မဟာသမ်မတရာဇာ၏ဇနီး မွသန်တာ အုတျဂူကိုရှာတဲ့အခါမှာ အဲဒီနရောရဲ့ နံရံပျေါမှာရေးထားတဲ့စာသား . . . မငျးသားကွီးရှဘေနျး မှာကွားတဲ့ စာသားလေးကို ကြှနျတျောတှလေို့ . . . အဲဒါကို ပွနျပွောခငျြပါတယျ။ ဦးဝဟေငျအောငျ တို့လို့ ဌနျကရိုငျး ကခြငျြမှကမြယျ။ အဲဒီမှာ ဘာပွောလဲဆိုရငျ စကားလုံးတိုငျးမှာ အဓိပ်ပါယျ ရှိပါတယျ။ “နောကျသားနောငျလူ၊ ရခိုငျသူတို့၊ အယူမပွောငျး၊ ငါ့လမျးကွောငျးကို ကောငျးကောငျးလိုကျနာ၊ ပွညျဓညာကို၊ တဈခါမုခြ၊ ငါရို့ရအံ့” ဆိုတာကိုရငျထဲမှာ ဆိုကွညျ့ပါ။ ကွကျသီးဖွနျးဖွနျးထသှားတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ။ လကျမလြော့နဲ့၊ ငါတို့လို ပွညျဓညာကို တဈခါရအောငျ ငါ့လမျးကွောငျးအတိုငျးသှားကွ။ ရကိုရ,ရမယျဆိုတဲ့ သံဓိဋ်ဌာနျ သူ့မှာရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ကြှနျတျောတို့ အခု အခြုပျအခွာအာဏာအတှကျ လုပျတဲ့အခါမှာ နညျးလမျးနှဈသှယျရှိပါတယျ။ နရောတိုငျးမှာလညျး ကြှနျတျောပွောပါတယျ၊ တဈခုက နိုငျငံရေးမှာ လကျနကျကိုငျပွီးတျောလှနျတာ . . . တျောလှနျရေးလို့ပွောပါတယျ။
လူထုကို ဗဟိုပွုပွီးတော့ . . . လူထုကိုစညျးရုံးပွီး ပနျးတိုငျကို ရောကျအောငျ လုပျတာ နိုငျငံရေး လို့ချေါပါတယျ။ လူထုနိုငျငံရေး။ ကြှနျတျောတို့ အခု လုပျနတော လူထုနိုငျငံရေးပါ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပနျးတိုငျသညျ တူပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျော . . . ၂၀၁၄ . . . ရခိုငျဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျနဲ့ ရခိုငျ တိုငျရငျးသားမြား တိုးတကျရေးပါတီ ပူးပေါငျးဖို့ရာ အဆငျပွတေဲ့ကာလ . . . မလေးရှားကို ဖိတျလို့ ကြှနျတျောတို့ကို ဒီလိုမြိုး ဟောပွောပှဲ လုပျခိုငျးပါတယျ။ အဲဒီမှာ ပထမဆုံး ကြှနျတျော ပွောတဲ့ စကားအားလုံး၏ အနှဈသာရသညျ . . . အတှငျး-အပွငျ ညီညှတျဖို့လိုတယျ၊ လူမြိုးတိုငျးမှာ အန်တိမရညျမှနျးခကျြရှိတယျ၊ ရညျမှနျးခကျြပေါကျမွောကျဖို့ အတှကျ အတှငျး-အပွငျ ညီညှတျဖို့လိုတယျ၊ အပွငျသညျ အပွငျအလုပျကို လုပျ၊ အတှငျးသညျ အတှငျး အလုပျ ကိုလုပျ၊ အတှငျး-အပွငျ ညီညှတျသော တဈနသေ့ညျ အန်တိမရညျမှနျးခကျြကို ပေါကျမွောကျအောငျမွငျတဲ့နေ့ ဖွဈတယျလို့ ကြှနျတျောပွောပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ မလေးရှားကို ရောကျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . ထိုငျးကိုရောကျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . စင်ျကာပူကို ရောကျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . ကမ်ဘာတဈခုလုံးကို ပြံ့နှံ့နတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . မလေးရှားအဖှဲ့တို့ ထိုငျးအဖှဲ့တို့ ဆိုတာမြိုး မလုပျကွပါနဲ့။ ကမ်ဘာအရပျရပျမှာ ရောကျနတေဲ့ ရခိုငျအမြိုးသား အဖှဲ့ခြုပျ ကိုဖှဲ့ပါ။ ရခိုငျအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျ ကိုဖှဲ့ပါ။ ညီညှတျဖို့ လိုတယျ။ ပွညျတှငျးမှာ လညျး ကြှနျတျောတို့ ညီညှတျရနျ လိုတယျ။ ပွညျတှငျးမှာလညျး ကြှနျတျောတို့ ညီညှတျမှုကိုယူမယျ။ သို့သျော အခုကြှနျတျော ရခိုငျအမြိုးသားပါတီမှ နှုတျထှကျတယျ။ ကြှနျတျောမြှျောမှနျးတဲ့ အတှငျးညီညှတျမှုရှိလို့ နုတျထှကျသလား၊ မရှိလို့ နုတျထှကျသလား၊ သုံးသပျကွပါ။
ကြှနျတျောတို့ ဦးကြျောဇောဦးလညျး ရေးပါတယျ၊ ဗဟိုခကျြဆိုတာ . . . တပျဦး ဆိုတာ . . . ။ တပျဦးပွိုကှဲခွငျးသညျ ကြှနျတျောတို့မြှျောမှနျးတဲ့ Dream ပနျးတိုငျကို သှားလို့ မရောကျနိုငျတဲ့အနအေထားရှိလို့ . . . သှားလို့ရောကျနိုငျတဲ့ အနအေထားရှိအောငျ ကဈြလဈသော တပျဦးတဈခုကို တညျဆောကျဖို့အတှကျ လိုအပျလို့ . . . အခြိနျရှိလို့ . . . ဆိုတဲ့ သုံးသပျခကျြကိုသာ သုံးသပျလိုရှိရငျ . . . ။ ကြောကျဖွူမှာ အားပေး ကွပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးသညျ မြှျောမှနျးခကျြ မပြောကျဆုံးဖို့ လိုပါတယျ။ မြှျောမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျကို တဈလှမျးခငျြး တဈလှမျးခငျြးသှားကွဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါဟာ ကြှနျတျောတို့ လကျရှိ နိုငျငံရေး၏ လိုလားခကျြ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ပွနျကွညျ့ရငျ . . . အခုနက မငျးသားကွီး ရှဘေနျးမတိုငျခငျ ကြှနျတျော တငျပွခဲ့တဲ့ ငပေါလုံးတို့ . . . ဒီဘကျက ငသံဒှေ . . သူ့သား သကျနှငျးဝေ(ကို) ဟိုးဘကျက ဘိုးတျောမောငျဝိုငျးတို့က အမရပူရမှာ သတျပဈတဲ့အခါမှာ စဈအငျအား လကျနကျအငျအား မပို့နိုငျလို့ အရအေတှကျပွညျ့ဝအောငျ မပို့နိုငျ လို့ သတျပဈတဲ့အခါမှ သာလြှငျ၊ ဒီပုဂ်ဂိုလျတှကေို ပွနျတျောလှနျရမယျ ဆိုတဲ့အသိ၊ အဲဒီခါကမြှ အားလုံး သိပါ တယျ။ သူ့သမီးလညျး မွောကျဦးက မွို့ဝနျနဲ့ပေးစား၊ “အဒါထှီး” လို့ သိကွပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့ တပျဦးကကြှံသှားပွီး၊ ခုနက သတိရလာလို့ တျောလှနျရေးမြိုးစတှေ့ဖွေဈလာတဲ့အခါ . . . အခုထိ ငသံဒှဆေိုတဲ့ သစှာဖေါကျမြိုးရိုးကပဲ ပွနျပွီး တျောလှနျရေးကို စလာတဲ့အခါမှာ . . . အခု ကြှနျတျောတို့ အားလုံးသိပါတယျ . . . မွောကျဦးမွို့ကို ၀ိုငျးပွီးသိမျးဖို့ အောငျပှဲဆငျဖို့ကာလမှာတဈခါ ညီညှတျမှုက ပွိုကှဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ သံသရာလညျတာ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈ ရှိလာပါပွီ။ ဆိုတော့ . . . လှတျလပျရေး ခတျေဦး ဆရာတျော ဦးဥတ်တမတို့ ပွောခဲ့တဲ့အသုံးအနှုနျးတှေ ပွနျကွညျ့ပါ။ “လူဆိုတာ လုပျသငျ့လုပျ ထိုကျတဲ့အခြိနျမှာ လုပျနိုငျမှ လူနဲ့တူတယျ” ။ အခြိနျအရ ပေးထားတဲ့ လုပျသငျ့ လုပျထိုကျတဲ့ အခြိနျကာလမှာ လုပျနိုငျမှ ဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ အခု ကမ်ဘာ့နိုငျငံရေး မွနျမာ့နိုငျငံရေး လကျရှိ ကြှနျတျောတို့ သှားနရေတဲ့ ပနျးတိုငျအားလုံးကို သုံးသပျလို့ရှိရငျ လုပျကိုလုပျရမယျ့ ကာလတဈခုဟာ လာမယျ့ “၂၀၂၀” မှာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာ့နိုငျငံရေးရဲ့နှဈပေါငျး (၇၀)အကပျြအတညျး . . . ရခိုငျတို့ရဲ့နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈကွာ . . . ခုနက ဦးဝဟေငျအောငျ လညျးပွောခဲ့တယျ . . . ကြှနျတျောတို့ မြိုးဆကျ ငါးဆကျနီးပါးလောကျ ဒုက်ခသုက်ခ ခံပွီးတော့ အဆငျးရဲတကာ့ အဆငျးရဲဆုံးဘဝမှာ မဆငျးရဲသငျ့ပါလကျြနဲ့ အခုလိုရပျတညျနရေတဲ့ သခငျဖွဈခဲ့တဲ့ ကြှနျဖွဈဆဲ လူမြိုး တဈယောကျ လူမြိုးတဈဦး၊ လူမြိုးတဈစု၊ လူမြိုးတဈမြိုး . . . စဉျစားရငျ ရငျနာဖို့ ကောငျး ပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့က . . . (၂၃၃)နှဈ . . . နောကျနှဈဆိုရငျ (၂၃၄)နှဈ . . . ရောကျတိုငျး ရောကျတိုငျးမှာ ပွနျပွီးတော့ ငါတို့ အခြုပျအခွာ အာဏာ ကို ဘယျလိုရမှာလဲ . . . ။ ဒီလိုစိတျမြိုး မှေးဖို့လိုတဲ့အခါမှာ . . . အခုနက ကြှနျတျောတို့ တငျပွတဲ့အတိုငျး တျောလှနျရေး၊ လကျနကျကိုငျရငျ လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေး၊ လူထုကို စညျးရုံးရငျ လူထုနညျးနဲ့ ဗဟိုပွုတဲ့နိုငျငံရေး၊ အားလုံးရဲ့ပနျးတိုငျဟာ အခု အခြုပျအခွာအာဏာကို ဘယျလို ပွနျရမှာလဲ၊ တဈနညျးအားဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့၏ အုပျခြုပျရေးယန်တရား အာဏာကို ဘယျလိုပွနျရမှာလဲ၊ ဆိုတဲ့ နညျးမှာ သှားပွီး ဦးတိုကျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အာဏာကိုရမယျ့ နညျး ပေါငျးစုံနဲ့ ကြှနျတျောတို့ လူထုကို စညျးရုံးတယျ . . . လကျနကျကိုငျ တှနျးလှနျတယျ . . . အမြိုးသား လှတျမွောကျရေးတိုကျပှဲကို ဆငျနှဲတယျ . . . ဆိုတာ အားလုံးသညျ . . . ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျတဈခုကို သှားနတေယျ ဆိုတဲ့ သဘောတရား တဈခုကိုတော့ နားလညျပေးစခေငျြပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ အခု ပွနျကွညျ့ရငျ . . . မွို့ပျေါထကျ ကြေးရှာလူထု မြားတာကို သဘောပေါကျပါတယျ။
ကြေးလကျက မွို့ထကျ ဆငျးရဲပါတယျ။ တဈခါက အမျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ကွားဖွတျရှေး ကောကျပှဲမှာ နိုငျလို့ ပုဏ်ဏားကြှနျးတို့ . . . ရှာတှကေိုဖွတျပွီး စဈတှလောတဲ့ အခါ . . . အမြားအားဖွငျ့ ကြေးလကျတှကေ တိုးတိုးလေးလာပွောတဲ့ . . . အသကျကွီးကွီး ပုဂ်ဂိုလျ အမြိုးသမီးကွီးတှကေ ဘာပွောလဲ ဆိုရငျ “လှတျလပျရေး” ကို ဘယျတော့ရမှာလဲ၊ “လှတျလပျရေး” ကို ငါတို့ ဘယျတော့ရမှာလဲ။ တိုးတိုးလေး ပွောတာပါ။ “လှတျလပျရေး” ကိုလိုခငျြတယျ။ အသကျကွီးကွီးတှေ ဆငျးရဲဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘူး။ အဖိနှိပျခံ ဘဝမှာ မနခေငျြတော့ဘူး။ ဒီလိုလှတျလပျရေးကို လိုခငျြတယျဆိုတဲ့ ဒီအသကျအရှယျ (၈၀) (၇၀) ကြေးလကျ လူထုရဲ့ ရငျထဲမှာ ဖွဈတညျနခွေငျးပငျလြှငျ မွနျမာ့နိုငျငံရေးကို ပွနျသုံးသပျရမယျ့ကာလလို့ နားလညျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
တိုငျးရငျးသားတှရေငျထဲမှာ ဘယျလိုဖွဈလို့ အမြိုးသား လှတျမွောကျမှုကို လိုခငျြသလဲ၊ လှပျလပျတဲ့ဘဝမှာ တနျးတူအခှငျ့အရေးနဲ့နခေငျြလို့ လှတျလပျတဲ့နိုငျငံကို တညျထောငျလာပွီးခါမှ နှဈပေါငျး (၇၀)လညျး ကွာလို့ ပေးသငျ့ပေးထိုကျတဲ့ အတိုငျးအတာ တဈခုထိ ပေးဖို့လိုအပျတဲ့ ကာလကြျောလှနျပွီးခါမှ . . . ဘာဖွဈလို့ ပိုပွီးပွငျထနျတဲ့ လကျနကျကိုငျပဋိပက်ခဖွဈလာရသလဲ။ ရခိုငျပွညျမှာလညျး အသကျကွီးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျ တှေ ခံစားသလို . . . တိုငျးရငျးသားတိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ ခံစားရလိမျ့မယျ။ ဘာဖွဈလို့ လှတျလပျရေးကို ပွနျတောငျးရသလဲ။ အင်ျဂလိပျဆီမှာ ကြှနျဖွဈခဲ့တယျ . . . ဗမာနိုငျငံ တဈခုလုံး။ အခု တိုငျးရငျးသားတှေ ဗမာ ဆီမှာ ကြှနျဖွဈနတေယျလို့ ခံစားနရေရငျ . . . ဗမာတှကေ ပွနျသုံးသပျရမယျ . . . ငါတို့ ဘာမှားနလေဲ။ ပွနျ သုံးသပျရမယျ့ ကာလ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံရေးသညျ အမွဲတမျး ထိတှနေ့တေဲ့ တိုကျပှဲဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ . . . လူထုနညျးနဲ့ . . . ကြှနျတျောတို့၏ အခြုပျအခွာအာဏာ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ အခြုပျအခွာအာဏာ၊ ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာနျးပိုငျခှငျ့၊ အတိတျဘဝမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့သော အခြုပျအခွာအာဏာကို ပွနျရဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့က နိုငျငံရေးပါတီကို တညျထောငျသလို . . . ဒီနညျးက ဖွငျ့တော့ အလုပျမဖွဈ၊ လကျနကျကိုငျ မှသာ ငါတို့၏ ဆုံးရှုံးနသေော အခြုပျအခွာအာဏာကိုရမယျလို့ ယုံလို့ လကျနကျကိုငျတယျ။ ပနျးတိုငျကတော့ အတူတူပါပဲ။
ဒါကွောငျ့ လကျရှိအုပျခြုပျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . ငါတို့ ဘယျလောကျမြား တိုငျးရငျးသားတှေ ကို ပေးရနျလိုသလဲ။
ပွညျထောငျစုကိုလညျး မပွိုကှဲစခေငျြ . . . မွပေုံကို ဒီအတိုငျးလညျး ထားခငျြတယျ၊ တိုငျးရငျးသားတှရေငျထဲမှာလညျး အတူတူ လှတျလပျခွငျးအရသာကို မခံစားရသေးလို့ ယူဆယုံကွညျနတေယျ၊ တနျးတူအခှငျ့အရေးမရှိ၊ အုပျခြုပျခံဘဝမှာ နရေ တယျလို့ ယူဆနရေငျ . . . ကြှနျတျောတို့ တဈစုံတဈခုမြား အပေးအယူ လုပျသငျ့သလား ဆိုတဲ့ . . . လကျရှိနှဈပေါငျး (၇၀) နိုငျငံရေးပဋိပက်ခ၏ ထှကျလာတဲ့ အသံတှကေို သုံးသပျရနျ မလိုဘူးလား။
ဦးဝဟေငျအောငျပွောခဲ့တဲ့ အတိုငျးပါ။ (၄၈)၊ (၅၈)၊ (၆၂) မှာ အာဏာသိမျး တယျ။ ပထစ လကျထကျ မတိုငျခငျမှာ ဦးနဝေငျးကို အိမျစောငျ့ခနျ့ထားတယျ။ (၆၂)ကနေ (၈၈)ထိ၊ (၈၈)ကနေ (၂၀၁၀)ထိ၊ ၂၀၁၀ နောကျပိုငျးမှာ ဒီမိုကရစေီအစိုးရ၊ ဖှဲ့စညျးပုံ အခွခေံဥပဒတေဈခု။ အမြားကွီး မမြှျောလငျခဲ့ပါ။
၂၀၁၅ မှာ လူထုအစိုးရ၊ ပွညျသူ့အစိုးရမတိုငျခငျ အမြားကွီး မြှျောလငျ့ခဲ့တယျ။ အခု ကိုယျတိုငျ ကွုံရတဲ့အခါ ပိုပွီးတော့ ခံစားရတယျ။ အဲဒီသံသရာက မထှကျ သေးပါ။ ၁၉၄၈ ကနတေကျလာတဲ့ ဗမာ အမြိုးသားတှပေါတဲ့ အစိုးရ၊ ယငျးမူဝါဒ၊ ယငျးကငျြ့စဉျ၊ ယနအေ့ထိရှိတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး လကျနကျကိုငျ ပဋိပက်ခသညျ အမွငျ့ဆုံး၊ နိုငျငံရေးတိုကျပှဲသညျ အပွငျးထနျဆုံး၊ ယငျးကာလမှာ ရခိုငျပွညျမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ နိုငျငံရေးပါတီတညျထောငျပါသလဲ။ ဦးဝဟေငျအောငျလညျး ပွောခဲ့ပါတယျ။ အာဏာလိုခငျြလို့၊ အခြုပျအခွာအာဏာကို ဒီနညျးနဲ့ ရမယျလို့ မြှျောလငျ့လို့ ဒီနညျးကိုသုံးတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ၂၀၁၅ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲမှာ ကြှနျတျော ပွောခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့က သနေတျကိုငျတဲ့ လူမဟုတျ။ သနေတျမကိုငျသျောလညျး ပါးစပျက ထှကျ လာတဲ့ စကားတလုံးသညျ ကညျြဆံထကျပွငျးရမယျ။ ဒါကွောငျ့ အခြုပျအခွာအာဏာကို ကညျြဆံတဈတောငျ့မှ မသုံးဘဲနဲ့ ရအောငျယူမယျ။ ရငျထဲမှာ အမြိုးသားညီညှတျမှုစိတျ၊ ကိုယျ့ပွညျကို ကိုယျတို့ ကိုယျတိုငျ အုပျခြုပျခငျြ တဲ့ စိတျ၊ ရက်ခိတစိတျ တညျရှိနရေငျ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကြှနျမဟုတျ။ ရုနျးကနျလိုသောစိတျ လူတိုငျးမှာ ရှိနဖေို့ လိုတယျ။ ကြားကုပျကြားခဲ ကွိုးစားနဖေို့လိုတယျ။ အခု ကြှနျတေျာ့တို့ အသကျကွီးပွီ၊ (၆၁)။ (၆၀)။ (၆၀)အရှယျတို့ ရငျထဲမှာ (၆၀)အရှယျတို့ ရငျထဲအလြောကျ ရှိဖို့လိုပါတယျ။ (၁၀)စုနှဈ၊ အသကျ(၂၀)အရှယျ တှေ ရငျထဲမှာ စှဲနဈသှားအောငျ . . . ငါတို့၏ မပွီးဆုံးသေးတဲ့ တာဝနျကို လကျဆငျ့ကမျးပွီးလုပျကွ၊ လကျဆငျ့ကမျးပွီး ခြီတကျ၊ ပနျးတိုငျကို ရောကျအောငျလုပျကွ . . . ဆိုတဲ့ ဒီရငျထဲက ရှိသငျ့တဲ့ မာန၊ ခံယူခကျြ၊ ဦးတညျခကျြ၊ ရညျရှယျခကျြ တှကေို မပြောကျအောငျ ကြှနျတျောတို့ မိဘပွညျသူမြား ညီအဈကိုမောငျနှမမြား နုလုံးသားထဲမှာသှငျးနိုငျရငျ ကြှနျတျောတို့၏ တျောလှနျစိတျမပြောကျ။ ယငျးသညျပငျလြှငျ အခြုပျအခွာ အာဏာသညျ လကျတကမျးမှာရှိ တယျဆိုတာကို . . . ကြှနျတျောတို့ ယုံကိုယုံ ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ ရခိုငျကို လကျရှိ တိုငျးရငျးသားမြားအားလုံးထဲမှာ အကွောကျဆုံး။ ရခိုငျတို့မှာ လကျညိုးထိုးပွစရာ သမိုငျးသကျသရှေိတယျ။ သီးသနျ့နယျမွရှေိတယျ။ လုံလောကျတဲ့ လူဦးရနေဲ့ စီးပှားရေး ရှိတယျ။ ကမ်ဘာ၏ စဈရေးဆိုငျရာ Military အခုနက Politics, နောကျ Geo-politics, ပထဝီနိုငျငံရေးဆိုငျရာ ဗဟို၊ စီးပှားရေးဗဟို Social Economics နဲ့ပတျသကျလို့ ဒီဗဟိုခကျြမှာ ကတြယျ။ အဲဒါဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ (၁၀)စုနှဈ တဈစု လောကျက စကလြာတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အခု အားလုံး ကမ်ဘာအရေး၊ မွနျမာ့အရေး၊ ရခိုငျအရေးကို သုံးသပျ တိုငျးမှာ . . . ကမ်ဘာမှာ ရခိုငျသညျ အခုရှတေ့နျးကို ထှကျလာတယျ။ ကမ်ဘာမှာ ရခိုငျတို့၏ အနအေထားကို ပိုပွီး အာရုံစိုကျ လာကွတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈဝနျးကငျြလောကျ ရောကျလာတဲ့အခါ . . . ။ အခု ကြှနျတျောတို့က ဟိုတုနျး ကလညျး ယုံပါတယျ . . . ဗိုလျခြုပျခငျညှနျ့တို့ လို အငျမတနျ တနျခိုးထှားတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှေ ရခိုငျပွညျကိုလာရငျ၊ “မိုးရှာခတြယျ” ၊ ရခိုငျပွညျမှာ “နတျကောငျးနတျမွတျမြား” ရှိတယျ၊ “စောငျ့ရှောကျတယျ” မဟာမွတျမုနိကုနျးမှာလညျး . . . အဲဒီလိုတှေ ရှိတယျ။
ကြှနျတျောတို့ (၉၉)လတ်တံ့ကို ပွနျကွညျ့လိုကျရငျ “အလယျတရိုး ထီးဖွူမိုး” မယျ လို့ ဆိုတယျ။ ကြောကျဖွူ . . . သူ့ဟာသူ ဗဟိုခကျြကို ရောကျသှားတယျ။ အဲဒီလတ်တံ့မှာ ပွနျကွညျ့။ “မဟာမွတျမုနိကို စိနပွညျက လာပငျ့မယျ၊ ပငျ့ပွီးရငျရခိုငျကို ပွနျအပျမယျ” ။ ဆိုတော့ . . . ပွနျပွီး ကြှနျတျောတို့၏ လမျးကွောငျး သညျ . . . ၂၀၁၀ နီးပါးလောကျက၊ မတိုငျခငျလောကျက ပှတျရှမှုသညျ ၁၀-စုနှဈတဈခုအတှငျးမှာ ထိပျပိုငျးကို ရောကျသှားတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကုလား-ရခိုငျ ပဋိပက်ခသညျ မွငျ့လာတယျ။ ရခိုငျတို့၏ အလယျတညျ့တညျ့မှာ ကမ်ဘာစီးပှားရေးဗဟိုခကျြကို ရောကျမယျ့လမျးကွောငျးသညျ ခုနက ကမ်ဘာမဟာအငျအားကွီး နိုငျငံမြား၏ ပှတျရှမှု ဖွဈလာတယျ။
မကွုံစမဖူး ကြှနျတျောတို့၏ ဘင်ျဂလား သမုဒ်ဒရာ ပငျလယျပွငျအောကျထဲမှာ ဓါတျငှသေိုကျတှေ မြားစှာ တှလေ့ာတယျ။ ယခု ဗမာပွညျကိုတှေးရငျ၊ ရခိုငျပွညျ၊ ရခိုငျပွညျကို တှေးရငျ . . . ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတော၊ မယူကမျးဒသေ . . . ရခိုငျနိုငျငံရေးတဈခု၊ ဗမာ့နိုငျငံရေးတဈခုလုံး၏ “ထိပျမှာ” ရှိနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ . . . ပွနျကွညျ့ပါ။ လကျနကျကိုငျ အမြိုးသားတျောလှနျရေး အငျအားစုတှကေို ပွနျကွညျ့ရငျလညျး . . . အရငျက ထိုငျးနယျစပျက လူဦးရေ နညျးနညျးပါးပါးလောကျနဲ့ လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေး နယျမွထေဲကို ဝငျလာတဲ့ပါတီတှေ အထူးသဖွငျ့ ရသတေ့ောငျနယျက ပုဂ်ဂိုလျတှေ ခေါငျးဆောငျခဲ့ကွတယျ။ သို့သျောလညျး ပနျးတိုငျမရောကျခဲ့ကွပါဘူး။
အခု လှနျခဲ့သညျ့ ကိုးနှဈ-ခုနဈနှဈလောကျက ထှနျးပျေါလာတဲ့ “ရက်ခိုငျ့ တပျမတျော” ၊ . . . အားလုံးသညျ အိပျမကျတဈခုဆီကို သှားနတေယျ။ အဲသညျအိပျမကျသညျ ခုနက မွနျမာ့နိုငျငံရေး အားအနညျးဆုံးအခြိနျမှာ ကြှနျတျောတို့၏ အခှငျ့အရေး ကို အမိအရ ဆုပျကိုငျနိုငျဖို့ . . . ဆရာတျော ဦးဥတ်တမ ပွောခဲ့သလို – “ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ရအောငျယူနိုငျမှ လူနဲ့တူတယျ” ၊ ရသငျ့ရထိုကျသညျ့ အခှငျ့အရေးကို ရအောငျယူဖို့ အခြိနျသညျ လကျတကမျးမှာရှိနသေညျ့အခါမှာ- ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံရေး နယျပယျထဲက ရခိုငျတို့၏နိုငျငံရေးဗဟိုခကျြကို ပွနျကွညျ့တဲ့အခါမှာ- ဗဟိုမှာ ကနျအားမြားနတေယျ။ အခငျြးခငျြးပဋိပက်ခမြားနတေယျ။ ဗိုလျခငျြးပြံ မွောကျဦးကို သိမျးခါနီးမှာ ဖွဈနတေဲ့ အဖွဈအပကျြမြိုး . . . ကြှနျတျောတို့ ကွုံနကွေရပွီ။ ဒါကွောငျ့ ဗဟိုခကျြ . . . ခိုငျမာသော၊ ညီညှတျသော၊ စညျးကမျးပွညျ့ဝသော၊ တပျဦးတဈခု လိုအပျတယျ ဆိုတဲ့ ခံယူခကျြနဲ့ ကြှနျတျောနောကျကို ဆုတျပါတယျ။ နောကျကို ဆုတျရငျးနဲ့ တညျဆောကျပါတယျ။
ရှကေို့သှားဖို့အခြိနျ လုံလောကျတဲ့ အတိုငျးအတာ ကြှနျတျောတို့ ရှိတယျလို့ ထငျပါတယျ။ အဲဒါဟာ ဒီနေ့ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈကွာက စပွီးတော့ . . . ဦးဝဟေငျအောငျ တို့လညျး ပွောပါတယျ . . . နှဈပေါငျး (၄၀)၊ ၁၇၈၄ မှ အင်ျဂလိပျ သိမျးတဲ့ ၁၈၂၃-၂၄ ထိ နှဈပေါငျး (၄၀)၊ အင်ျဂလိပျအုပျခြုပျတဲ့ နှဈပေါငျး (၁၀၀)ခတျေကောငျးကာလ၊ အဲဒီကာလ တိုငျးမှာ ဖွဈတညျလာတဲ့ တျောလှနျစိတျ၊ မပွီးဆုံးသေးတဲ့ ဒီ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ တျောလှနျစိတျ၊ အားလုံးရငျထဲမှာ စှဲငွိသှားမယျဆိုရငျ . . . ကြှနျတျောတို့ ဘာလုပျသငျ့သလဲ ဆိုတဲ့ အဖွတေဈခုကို ရလာမယျ ထငျပါတယျ။
ဒီလိုရသှားအောငျ ဦးဝဟေငျအောငျတို့ ကြှနျတျောတို့ ဆှေးနှေးနိုငျခွငျးသညျပငျလြှငျ ကြှနျတျောတို့၏ ပနျးတိုငျ၊ ရညျမှနျးခကျြသညျ ကြှနျတျောတို့၏ မြိုးဆကျသဈတို့၏ ရငျထဲမှစှဲငွိသှားပွီ လို့ ကြှနျတျောတို့ ယုံပါတယျ။
ဒီလိုစှဲငွိသှားမှ လကျဆငျ့ကမျးသှားမှ ကြှနျတျောတို့ မြှျောမှနျးတဲ့ “တခါမုခြ . . . ပွညျဓညာကို၊ တခါမုခြ၊ ငါတို့ရအံ့” ဆိုတဲ့ မဆုတျနဈတဲ့ သံဓိဋ်ဌာနျဖွဈပါတယျ။ ဒီလို သံဓိဋ်ဌာနျသညျ ကွှရောကျလာကွတဲ့ ကြှနျတျောတငျပွလို့ နားထောငျနကွေတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား၏ ရငျထဲမှာ၊ နှလုံးထဲမှာ စှဲစှဲမွဲမွဲ ရှိခဲ့လို့ ရှိခဲ့ကွမယျဆိုရငျ . . . ဘာကွောငျ့ ကိုယျ့ပွညျ ကိုယျမငျး၊ ကိုယျ့နိုငျငံနဲ့ ကိုယျပိုငျနိုငျငံနဲ့ နထေိုငျလာခဲ့တဲ့လူမြိုး၊ ဘာကွောငျ့ ပွိုကှဲခြိနျတနျတဲ့အခါ ပွိုကှဲသှားရတယျ ဆိုတဲ့ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈကွာသမိုငျးကို ပွနျပွီး ဆငျခွငျနိုငျဖို့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ တဈဦးခငျြး ဆငျခွငျနိုငျဖို့ ဖွဈပါတယျ။ တဈဦးခငျြး ဆငျခွငျနိုငျမှသာလြှငျ ကိုယျ့မြိုးဆကျတှကေို တဈဦးခငျြးက တာဝနျယူပွီးတော့ . . . ဒီလိုဖွငျ့ သမိုငျးတှငျ ငါတို့ကွုံခဲ့ရတယျ၊ ငါတို့မြှျောမှနျးတဲ့ပနျးတိုငျ ရညျမှနျးခကျြကို မငျးတို့ လကျဆငျ့ကမျးပွီးတော့ မရ-ရအောငျ ယူကွ ဆိုတဲ့ တာဝနျပေးခကျြမြား ရှိလာရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ရခိုငျမှာ- ဒီလိုစာပေ ဟောပွောမှုတှရှေိပါတယျ။ တခွားလူမြိုးတှမှော မရှိလို့လညျး . . . ကြှနျတျောတို့လို ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့မရှိ လို့လညျး ပွောစမှတျပွုကွပါတယျ။ ဗမာတှမှောတော့ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ နိုငျငံရေး ပါတီက ပုဂ်ဂိုလျတှေ . . . ကြှနျတျော ထငျပါတယျ . . . လကျနကျကိုငျတျောလှနျရေးက ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး ဦးဝဟေငျအောငျတို့လို စာရေးဆရာတှေ စဈတှညေိုသနျ့ တို့လို့ စာရေးဆရာတှေ၊ ပွညျသူတို့ထံသှားပွီး သမိုငျး၏ဒဏျရာဒဏျခကျြ . . . ရှကေို့သှားဖို့ရာ မြှျောမှနျးခကျြ တှကေို နားထဲမှာ စှဲဝငျသှားစအေောငျ . . . တဈရှာဝငျ၊ တဈရှာထှကျ၊ ယခုလို စာပဟေောပွောပှဲတှကေို ဖနျတီး ပွီးတော့ ဇာတိသှေး၊ ဇာတိမာနျမပြောကျအောငျ၊ အမြိုးသားရညျမှနျးခကျြတှကေို ကိနျးဝပျအောငျ၊ ဆှေးနှေးပေး စခေဲ့ခွငျးသညျပငျလြှငျ . . ကြှနျတျောထငျတယျ . . . တာဝနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ အလှနျ့အလှနျ တာဝနျကြေ ကွပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နိုငျငံရေးပါတီမြားက ပုဂ်ဂိုလျတှကေလညျး စာရေးဆရာကွီးတှေ ခုလိုစီစဉျတဲ့ စာပဟေောပွောပှဲတှကေို စီစဉျတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှကေို အမွဲတမျးအားပေးပါတယျ။ လေးစားပါ တယျ။ ဒီလိုပဲ လကျနကျကိုငျတိုကျပှဲဝငျနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေလညျးပဲ စာရေးဆရာတှကေို၊ အခုလိုစီစဉျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှကေို ကြေးဇူးတငျမယျလို့ ထငျပါတယျ။ ဒါသညျ အမြိုးသား ပနျးတိုငျတဈခုကို ရောကျအောငျ နိုငျငံရေးအရ ဆောငျရှကျနခွေငျးဖွဈတယျ လို့ ကြှနျတျောတို့ နားလညျ ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခြုံ့လိုကျရရငျ . . . ကြှနျတျောတို့အားလုံး ရငျထဲတှငျ နှဈပေါငျး (၂၃၃)နှဈ . . . နောကျနှဈ ဆိုရငျ (၂၃၄)နှဈ . . . ဒီလိုမြိူး အခမျးအနားတှကေို ရောကျတိုငျး ရောကျတိုငျးမှာ ကြှနျတျောတို့၏ တာဝနျ၊ ကြှနျတျောတို့၏ပနျးတိုငျ၊ ရညျမှနျးခကျြကို ရငျထဲမှာ . . . အားလုံးသူတို့၏ ရငျထဲမှာ . . . စှဲငွိသှားစေ အောငျ မှတျမိသှားအောငျ ဒီလိုဟောပွောပှဲတှကေ သငျခနျးစာကို ရယူသှားနိုငျခဲ့တယျဆိုရငျ . . . စီစဉျတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြား၏ ရညျရှယျခကျြ အောငျမွငျတယျ လို့ ကြှနျတျောယုံပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နောငျနှဈမြားတှငျလညျး အတတျနိုငျဆုံး ကွိုးစားပွီး ကငျြးပပေးကွပါ။ ရသတေ့ောငျမွို့မှာ မဟုတျဘဲနဲ့ . . . ဗဟိုပွုနိုငျလောကျတဲ့ ကြေးလကျ တိုကျနယျတှမှော သှားပွီး ကငျြးပပေး စလေိုပါတယျ။ ဒီလို ကြှနျတျောတို့ မွို့တိုငျးမွို့တိုငျးမှာ ယနလေို့ အခမျးအနားမြားကို ကငျြးပပေးခွငျးဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ တဈမြိုးသားလုံးထားအပျသညျ့ ပနျးတိုငျရညျမှနျးခကျြကဘာလဲ၊ ဘယျလောကျထိ ကြားကုပျ ကြားခဲ အမြိုးသားရေးတာဝနျတဈရပျအနနေဲ့ ဆောငျရှကျဖို့လိုတယျဆိုတဲ့ အသိတှကေို ဖလှယျနိုငျမယျ လို့ ယုံပါတယျ။
အားလုံးကို ခြုံ့ကွညျ့ရရငျ . . . ကြှနျတျောတို့ကလညျး . . . ရှငျဘုရငျခတျေက ဖွဈပကျြလာတဲ့ အကွောငျး အရာတှကေို စီကာပတျကုံးတော့ မပွောတော့ပါ။ ဖွဈပကျြမှု မြားကတော့ သမိုငျးမှာ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ ရှဆေ့ကျသှား တဲ့အခါမှာ- ကြှနျတျောတို့ခြီတကျတဲ့ ခရီးလမျးကွောငျးမှာ အတတျနိုငျ ဆုံး တတပျတအား အုပျတဈခပျြ သဲတဈပှငျ့အဖွဈ ပါပေးကွရနျ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ကြေးလကျ ပွညျသူတှကေို ပိုပွီး မတ်ေတာရပျ ခံလိုပါတယျ။ တကူးတက အခြိနျကုနျ ငှပေနျးလူပနျးပွီး ဒီမှာ လာပွီး နားထောငျ၊ ကိုယျ့ရပျရှာ ရောကျတဲ့အခါ ပွနျပွီး သကျဆိုငျတဲ့နရောတှမှော ကိုယျ့လူတှကေို ပွနျပွောပွ စခေငျြပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ တဈပွညျလုံး လှညျးနလှေအေောငျး အားလုံးမကနျြ အမြိုးသားရေးစိတျဓါတျရှိ နမှေ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ လကျရှိ အကဉျြးကပျြအတှငျးကနေ ရုနျးထှကျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ပွနျတှေးကွညျ့ရငျ . . . ဦးဝဟေငျအောငျ ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပါပဲ၊ အရှဖေ့ကျက ဖွဈလာတဲ့ဖိအား၊ အနောကျဖကျက ဖိလာတဲ့ ဖိအား ကွားမှာ . . . ကြှနျတျောတို့ အကဉျြးအကပျြကွားထဲမှာ ရောကျနပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဒီအခြိနျဒီကာလမှာ ကြှနျတျောတို့ ကြောခငျြးကပျပွီး နိုငျငံရေးအသိရှိရှိနဲ့ ကြှနျတျောတို့ သမိုငျးထဲမှာ ဝဲလညျလညျမဖွဈဘဲ နဲ့ နညျးပေါငျးစုံနဲ့ ပွနျပွီးတော့ ကိုယျ့ပွညျ ကိုယျ့ဒသေကို ပွနျလညျဆောကျရမယျ့ကာလဖွဈတယျဆိုတဲ့ သတိပေးခကျြတဈခုကိုတော့ခါ ကြှနျတျော ပွနျပွီးတော့ တငျပွလို ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတငျပွတဲ့အပိုငျးက ဒီလောကျဆိုရငျ ကဉျြးကဉျြးကလေးနဲ့ လိုရငျးကို ကြှနျတျောတငျပွခွငျးဖွဈတဲ့အတှကျ . . . ဒီလောကျပဲ တငျပွခဲ့တာကိုခှငျ့လှတျဖို့ မတ်ေတာရပျခံလိုပါတယျ။ အားလုံး တျောလှနျရေး သတိနဲ့ ကြှနျတျောတို့ မြှျောမှနျးတဲ့ ပနျးတိုငျ ရညျမှနျးခကျြကို ပေါကျမွောကျအောငျ တာဝနျတဈခုအဖွဈ ဆကျလကျပွီးတော့ မြိုးဆကျသဈမြားကို လကျဆငျ့ကမျးပေးကွပါလို့ တငျပွရငျး နိဂုံးခြုပျပါတယျ။ ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
Previous “Top ANP official quits, says party has lost way” |Myanmar Times
Next တသီးပုဂ်ဂလ အမတျအဖွဈ သတျမှတျပေးရနျ ပွညျထောငျစု ရှေး/ကျော သို့ တငျပွခွငျး